Wasaaradda Qorsheynta oo kulan wada tashi ah ka furtay Hirshabeelle+Sawirro | allsanaag
Wasaaradda Qorsheynta oo kulan wada tashi ah ka furtay Hirshabeelle+Sawirro
Kulan wada tashi ah oo ay ujeeddadiisu ahayd sidii ay Ururrada Bulshadda rayidka Hirshabeele talooyinkooda ay uga dhax muuqan lahaayeen Qorshaha horumarinta Qaranka ayaa lagu qabtay Magaalada Jowhar.
Kulanka oo ay ka qeyb galeen madax uu ka mid ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Asad Yusuf Qanyare ayaa looga hadlay sidii loo dar-dar gelin lahaa qorshaha Sagaalaad ee horumarinta Qaranka, iyo hadafka Wasaaradda oo ah in la dhagaeysto Bulashadda Soomaaliyeed oo dhan.
Agaasimaha ayaa sheegy in ay diyaar u yahiin in ay dhageystaan Urarrada Bulshada rayidka iyo talooyinkoooda ku aadan Qorshaha saldhigga u ah horuarminta Dalka, sida yarynta Saboolnimada, geeddi socodka deyn cafiska Soomaaliya.
Ururrada Bulshada rayidka ayaa loo qeybiyay Shan koox oo ay saldhig u tahay tubaha qorshaha horumarinta Qaranka Sagaalaad, waxanay Bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka kulankaa ku sugnaa soo bandhigeen aragti muhiim u ah geeddi socodka qorista qorshaha oo ahmiyad ballaaaran u leh Dalkeenna.
Dhinaca kale, waftiga uu hoggaaminayo agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheyta, Mudane Asad Yusuf Qanyare ,ayaa la kulmay Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeele, Cali Guudlaawe isagoo uga warbixiyay dedaallada ku aaddan geeddi socodka qorista qorshaha horuamrinta Qaranka Sagaaalaad.
Madaxeeyne, Cali Guudleewe ayaa soo dhaweeyay wadatashiga Wareegga kowaad ee Qorshaha horumarinta Qaranka Sagaalaad ee xiilligan ka socda Hirshabeelle iyo maamullada Dalka iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan.
← Ma Shamiitadaa cunaysaan Fiisaha Hindiya oo la Fududeen Doono →